10-waxyaabood oo uusan Director Hirani nagu tusin filimka Sanju balse nolosha Sanjay Dutt marnaba aan ka hareyn qaybta 2-aad – Filimside.net
10-waxyaabood oo uusan Director Hirani nagu tusin filimka Sanju balse nolosha Sanjay Dutt marnaba aan ka hareyn qaybta 2-aad
July 9, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: July 9, 2018
Kuso dhawaada qaybta labaad maqaalkeena aan kaga hadleenay 10-waxyaabood oo uusan Director Hirani nagu tusin filimka Sanju balse nolosha Sanjay Dutt marnaba aan ka hareyn:
4. Marka Uu Sanjay Dutt Qoorta Ka Qabtay Shah Rukh Khan: Sanjay waa qof u huri karo naftiisa saaxiibadiisa sidoo kalena lagama yaabo dadka waa weyn in agtiisa lagu liido ama lagu ag dafiro.
Haddaba waxaa dhacday 90-maadkii in Shah Rukh Khan uu dafiray ama salaami waayay ruug cadaa Amjid Khan xili Mehboob Studio ku wada sugnaayeen!
Sanjay Dutt ayaa arkay SRK dafiraada uu Amjid Khan ku sameeyay wuxuuna Dutt lumiyay dareenkii uu isku xakameyn lahaa kadibna qoorta ayuu SRK kasoo qabtay asigoo ku amray inuu Amjid salaamo!
Sanjay saaxiibadiisa ayaa is daji dhaheyn sidoo kalena SRK wuxuu u sheegay inaysan xushmad daro ka ahayn balse uusanba u jeedin mudane Amjid Khan.
Dhacdadan xiisaha badneyd filimka Sanju Director Rajkumar Hirani kuma uusan doo qaadanin asigoo diidanaa inuu xiligaan meel kaga dhaco maamuuska iyo mansabka uu Shah Rukh Khan leeyahay.
5. Labadiisii Guur Ee Ka Horeeyeen Guurkiisa Hadda: Qof walbo ayaa ag in Sanjay Dutt sedex guur soo maray balse filimka Sanju arimahaan xasaasiga ah laguma soo bandhigin.
Sanjay xaaskiisii kowaad Richa Sharma oo geeriyootay una dhashay gabadha Tirishala Dutt iyo xaaskiisii labaad Rhea Pillai marnaba filimka Sanju sheeko ahaan laguma soo qaadanin kaliya waxaa lagu soo qaatay filimkan Manyaata Dutt oo ah hadda xaaskiisa uu la nool yahay.
6. Geeridii Xaaskiisii Kowaad Richa Sharma: Xitaa haddii aan lagu soo qaadanin Sanjay xaasaskiisii hore waxaa la islahaa xaaskiisii kowaad oo xanuunka kansarka madaxa kaga dhacay Richa Sharmawaa la xusi doonaa laakiin marnaba hadalkeeda filimkan laguma soo qaadin.
Waxaa xusid mudan Sanjay Dutt buug noloshiisa laga qoray in lagu sheegay in Superstar-kan noloshiisa heerkii ugu hooseesay gaartay niyad ahaan iyo daryeel ahaan markii xaaskiisii kowaad Richa Sharma geeriyootay.
Marka sidee filimka Sanju loogu xusi waayay Richa Sharma haddiiba ay ahayd qof nolosha Sanjay saameyn lixaad leh ku yeelatay markii ay geeriyootay!
7. Gabadhiisa Curuda Ah Trishala Sanju Laguma Xusin: Waa la yaab oo is weydiin mudan in Sanjay Dutt gabadhiisa curuda ah Trishala Dutt aan marnaba lagu xusin filimka Sanju.
Inkastoo Trishala ay dagan tahay kuna soo bar baartay Mareekanka haddana waxaa wanaagsaneyd in Sanjay gabadhiisa xaaskiisii kowaad u dhashay oo haatan Bollywood-ka caan ka ah iyo baraha bulshada aan marnaba sheekada filimka Sanju lagu soo qaadanin waa arin kale oo aan la fahmi karin.
La Soco Qaybta 3-aad 10-waxyaabood oo uusan Director Hirani nagu tusin filimka Sanju balse nolosha Sanjay Dutt marnaba aan ka hareyn
Haddii Aadan Aqrisanin Maqaalkan Qaybtiisii Kowaad Fadlan RIIX HALKAAN
Waxaa Aqrisay 1,106